Tye Directional Drilling Rig Factory | I-China Horizontal Directional Drilling Rig Abavelisi, Abaxhasi
Ulwalathiso lwento ethe tyaba okanye isalathiso sendlela yindlela yokufaka imibhobho engaphantsi, imijelo okanye intambo ngokusebenzisa isixhobo sokugrumba umphezulu. Le ndlela ikhokelela kwimpembelelo encinci kummandla ojikelezileyo kwaye isetyenziswa ikakhulu xa ukuselela okanye ukumba kungasebenzi.
I-SHD18 yecala lokukhomba isixhobo sokugoba
I-SHD18 yemigca ethe tyaba esetyenziswayo isetyenziselwa ulwakhiwo lombhobho olungenamjelo kunye nokubekwa ngokutsha kombhobho ongaphantsi komhlaba. I-SHD18 ethe tyaba yomkhombandlela inezibonelelo zomsebenzi ophezulu, ukusebenza okuphezulu kunye nokusebenza ngokukhululekileyo. Izinto ezininzi eziphambili zamkela iimveliso ezaziwayo zamazwe aphesheya ukuqinisekisa umgangatho. Ngoomatshini abafanelekileyo kulwakhiwo lombhobho wamanzi, imibhobho yegesi, umbane, unxibelelwano ngomnxeba, inkqubo yokufudumeza, ishishini leoyile ekrwada.
I-SHD20 ye-rig ethe tyaba yokugrumba
I-SHD20 ye-Horizontal Directional Drill isetyenziswa ikakhulu kulwakhiwo lombhobho olungenamjelo kunye nokubekwa ngokutsha kombhobho ongaphantsi komhlaba. I-SINOVO SHD uthotho oxwesileyo yokuzijolisa ekhombisa ineenzuzo zomsebenzi ophambili, ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza kakuhle. Uninzi lwezinto eziphambili ze-SHD zecandelo elithe tyaba lokomba lokomba amkele iimveliso abadumileyo ngamazwe ukuqinisekisa umgangatho. Ngoomatshini abafanelekileyo kulwakhiwo lombhobho wamanzi, imibhobho yegesi, umbane, unxibelelwano ngomnxeba, inkqubo yokufudumeza, ishishini leoyile ekrwada.
I-SHD26 yecala lokukhomba isixhobo sokugrumba
I-SHD26 ukubola okuthe tyaba okanye ukukhangela indlela yindlela yokufaka imibhobho yangaphantsi komhlaba, imijikelezo okanye intambo ngokusebenzisa iarig yokwemba komhlaba. Le ndlela ikhokelela kwimpembelelo encinci kummandla ojikelezileyo kwaye isetyenziswa ikakhulu xa umsele okanye ukumba kungasebenzi.
SHD45 ukubhola oxwesileyo
I-Sinovo SHD45 yee-rigs zokomba ezithe tyaba zisetyenziswa kulwakhiwo lombhobho olungenamjelo kunye nokubekwa kwakhona kombhobho ongaphantsi komhlaba. I-SHD45 ethe tyaba yomkhombe wokugrumba isixhobo inezibonelelo zomsebenzi ophambili, ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza ngokukhululekileyo, izinto eziphambili eziphambili zamkela iimveliso ezaziwayo zamazwe aphesheya ukuqinisekisa umgangatho. Ngoomatshini abafanelekileyo kulwakhiwo lombhobho wamanzi, imibhobho yegesi, umbane, unxibelelwano ngomnxeba, inkqubo yokufudumeza, ishishini leoyile ekrwada.
I-SHD68 yecala lokukhomba isixhobo sokugoba
I-SHD68 yesicelo sokuGqithisa esisigxina
Ifanelekile abasebenzi, ukubhola civil, ukubhola komhlaba, kunye ubukhulu ukubhola enkulu, ukubhola nzulu, isicelo mobile kunye bhetyebhetye eziluncedo zejografi.
SHD200 oxwesileyo zemiyalelo yokomba rig
SHD200 Horizontal Directional Rig Application: Ifanele abasebenzi, ukubhola kwabantu, ukubhola komhlaba, ngobukhulu obukhulu bokubhola, ukubhola okunzulu, ukusetyenziswa kweselfowuni kunye nokuguquguquka kwezibonelelo zejografi.
SHD300 tyaba zemiyalelo yokomba rig
Ukubhola okuthe tyaba okanye ukucekisa isikhombisi yindlela yokufaka imibhobho engaphantsi komhlaba, imijelo okanye intambo ngokusebenzisa isixhobo sokugrumba esingaphezulu. Le ndlela ikhokelela kwimpembelelo encinci kummandla ojikelezileyo kwaye isetyenziswa ikakhulu xa umsele okanye ukumba kungasebenzi.
I-Sinovo ngumenzi we-drill ojikelezayo ohamba phambili e-China. I-SHD300 yethu ethe tyaba yokugrumba izixhobo zisetyenziswa ngakumbi kulwakhiwo lombhobho wamanzi, imibhobho yegesi, umbane, unxibelelwano ngomnxeba, iinkqubo zokufudumeza, kunye nomzi mveliso weoyile ekrwada.
I-SHD350 yokugungqa isixhobo sokugrumba
Indawo yokomba ethe tyaba yindlela yokufaka imibhobho engaphantsi komhlaba, imijelo okanye intambo ngokusebenzisa isixhobo sokugrumba esingaphezulu komhlaba. I-Sinovo SHD350 yemigca ethe tyaba yokugrumba iirigs zisetyenziselwa ulwakhiwo lombhobho ongenamjelo kunye nokutshintshwa kwemibhobho yangaphantsi komhlaba.
I-SHD350 yokugungxula ngomgama othe tyaba ilungele umhlaba onesanti, udongwe kunye neengqalutye, kwaye iqondo lokushisa elisebenzayo li-15 ℃ ~ + 45 ℃.